दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर!बल्ल बाँच्ने आशा पलायो! |
दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर!बल्ल बाँच्ने आशा पलायो!
September 22, 2021 adminLeaveaComment on दशैको मुखमा काठमाडौं उपत्यकावासीको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर!बल्ल बाँच्ने आशा पलायो!
काठमाडौं । उपत्यकाका केही स्थानीय तहहरुले संक्रमितको संख्यामा कमी हुदैगएको र आइसोलेसन केन्द्रमा बस्ने संक्रमितको संख्या घट्दै गएसँगै आइसोलेसन केन्द्र घटाउदै लगेका छन् । काठमाडौंं महानगपालिकाले संक्रमणको दोस्रो लहरमा छुट्याएको ३५० बेडहरु सबै खाली गरिएको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय संक्रमित बिरामीहरु होम आइसोलेसनमै बस्न चाहेकाकारण आइसोलेसन केन्द्रहरु तत्कालका लागि खाली गरेको महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरि कुँवरले जानकारी दिनुभयो । हाललाई सेवा स्थगित गरिएका आइसोलेसन केन्द्रहरु आवश्यक परेमा तत्काल महानगरले आइसोलेसन केन्द्रको स्थापना गर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता, ललितपुर महानगरपालिकामा पनि आइसोलेसन केन्द्रमा बस्ने संक्रमितको संख्यामा कमी हुदैगएको छ । महानगरमा ११० बेडको आइसोलेसनमा अहिले जम्मा २३ जनामात्र संक्रमित विरामी रहेको मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय विरामीहरु पनि घट्दै जान थालेको र धरै संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा बस्न चाहेका कारण पनि आइसोलेसनमा बस्नेको संख्यामा कमी हुदैगएको उहाँको भनाइ छ । आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको संख्या कमी हुदै गएमा थप आइसोलेसन केन्द्रहरु पनि विस्तारै घटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
अब विदेश जाँदा एक पैसा खर्च नहुने।म्यानपावरले पैसा माग्ने कार्वाही?
Breaking:ह्वात्तै सुनको मूल्य घटेपछि बजारमा सुन किन्नेहरुको घुइँचो!पुरा हेर्नुहोस्
भारतमा कोरोनाको यस्तो डरलाग्दो आवस्था।नेपालमा के होला?
नेपालमा भित्रिएको कोरोना खोप लगाउने सोचमा हुनुहन्छ?देखिए यस्ता खतरनाक साइड इफेक्ट।पढ्न नछुटाउनु होला।